စီးရီးအသစ်ခြောက်ခုအတွက် VFX ပေးပို့ခြင်း | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » FuseFX ခြောက်နယူးစီးရီးများအတွက် VFX ပျ
FuseFX ခြောက်နယူးစီးရီးများအတွက် VFX ပျ
Los Angeles- FuseFX ရဲ့ရုံးခန်းထဲမှာအရည်အသွေးမြင့်ရုပ်သံစီမံကိန်းများကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဆက်လက် Los Angeles မြို့နယူးယောက်နှင့်ဗန်ကူးဗား 2016 အတွက်ပွဲထွက်ခဲ့ပြီးကြပြီခြောက်လသစ်ကိုထိခိုက်စီးရီးများအတွက်အမြင်သက်ရောက်မှုန်ဆောင်မှုများပေးလျက်ရှိသည်။ သူတို့ဟာဖြစ်သော CBS, FX များအတွက်စီမံကိန်းများပါဝင်သည်, အား NBC, PBS နှင့် Syfy ။
အမေရိကန်ရာဇဝတ်မှုပုံပြင်: OJ Simpson vs အဆိုပါလူတွေက FX များအတွက်ရိုင်ယန်မာဖီ Productions ကနေထုတ်လုပ်တာ 10-ဇာတ်လမ်းတွဲ, စစ်မှန်တဲ့-ရာဇဝတ်မှုစီးရီး။ Jon Massey FuseFX များအတွက် VFX ကြီးကြပ်ရေးမှူးဖြစ်ပါသည်, Los Angeles မြို့.
ပြစ်မှုဆိုင်ရာစိတ်ထဲ: Beyond Borders, ပြည်ပမှာအန္တရာယ်အမေရိကန်တွေကူညီပေးသည်ကြောင်းအက်ဖ်ဘီအိုင်၏ဌာနခွဲအကြောင်းရာဇဝတ်မှုဒရာမာ။ ABC ရုပ်သံစတူဒီယိုနှင့်ဖြစ်သော CBS ရုပ်မြင်သံကြားစက်စတူဒီယိုဖြစ်သော CBS များအတွက်စီးရီးကိုထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ဂျေဆန် Piccioni FuseFX များအတွက် VFX ကြီးကြပ်ရေးမှူးဖြစ်ပါသည်, Los Angeles မြို့.
Rick အညစျအကွေး (အင်ဒရူးလင်ကွန်း) - အဆိုပါ Walking Dead - ရာသီ4_ ပြခန်း - ဓာတ်ပုံ Credit: ဖရန့် Ockenfels3/ AMC
ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်း၏ဂိမ်းထုတ်လုပ်တစ်ဦးတည်းနာရီဒရာမာ, Sony က ရုပ်ပုံများရုပ်မြင်သံကြားများအတွက် အား NBCတစ်မှောင်မိုက်အတိတ်နှင့်အတူအောင်မြင်သောရှေ့နေအကြောင်းကို။ အဆိုပါပြပွဲအမည်တူတစ်တူရကီစီးရီးအပေါ်အခြေခံသည်။ Greg Anderson တို့နှင့်ဒါဝိဒ် Reynolds က FuseFX နယူးယောက်များအတွက် VFX စူပါဗိုက်ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ Magician, Syfy များအတွက် Groundswell Productions အားဖြင့်ထုတ်လုပ်သည့် Lev မမေ့ဘူးစာအုပ်များပေါ်တွင်အခြေခံတဲ့စိတ်ကူးယဉ်စီးရီးဖြစ်ပါတယ်။ Shawn Hillier နှင့်ဂျေဆန် Dowdeswell FuseFX, ဗန်ကူးဗားများအတွက် VFX စူပါဗိုက်ဖြစ်ကြသည်။
သနားခြင်းကရုဏာအလမ်းဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း PBS များအတွက် Ridley Scott ရဲ့ဖြစ်သူ Scott အခမဲ့ Productions, ကွန်ယက်ရဲ့ပထမဆုံးအမေရိကန်ဒရာမာကထုတ်လုပ်တစ်ဦးခြောက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြည်တွင်းစစ်ကြီးမော်ကွန်း။ Jon Massey FuseFX များအတွက် VFX ကြီးကြပ်ရေးမှူးဖြစ်ပါသည်, Los Angeles မြို့.
အပြာရောင်၏အရိပ်, အား NBC'' s ကို FBI ကယ့်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတာဝန်အင်အားသုံးတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ Single-မိခင် NYPD အရာရှိအကြောင်းကိုရာဇဝတ်မှုဒရာမာ။ ဒါဝိဒ်သည် Reynolds က FuseFX နယူးယောက်များအတွက် VFX ကြီးကြပ်ရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်မြင်သံကြား တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် Visual Effects 2016-05-03
ယခင်: WCPMedia န်ဆောင်မှုများ FICTS 2016 ကမ္ဘာ့ဖလား FICTS စိန်ခေါ်မှုလက်အောက်ခံများကိုစီမံကွပ်ကဲကူညီပေး